सबै भन्दा राम्रो माफिया फिल्महरु: उनीहरु के हुन्? अद्यावधिक 2018 | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
गेब्रिएला मोरन | | सिइन, एक्शन सिनेमा, विधाहरु द्वारा सिनेमा, सामान्य
को माफिया फिल्महरु एक उच्च स्तर को चासो जगाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरुमा। भूखंडहरुमा हामी काण्ड र कार्य को पूरा आकर्षक संयोजन पाउँछौं। त्यो संग सन्दर्भ जस्तै व्यापार तस्करी, विभिन्न पक्षहरु बीच संघर्ष र स्थापित कानून बाहिर योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न को लागी रचनात्मकता को एक ठूलो सौदा जस्ता मुद्दाहरु लाई बनाइएको छ। ठूलो विषय ठूलो पर्दा मा विस्फोट गर्न को लागी! यही कारणले गर्दा यो लेख भर मा हामी सबै समय को सबै भन्दा राम्रो माफिया फिल्महरु संग हाम्रो चयन बेनकाब।
भूखंडहरु कुनै परी कथा को प्रतिनिधित्व गर्दैनन्: संगठनहरु मा अवस्थित कठोर वास्तविकता प्रतिबिम्बित माफिया र उनीहरु वरपर। जे होस्, कथाहरु हामीलाई एड्रेनालाईन र सनकी पात्रहरु जो विलासिता, शक्ति र लालच को माध्यम बाट साजिश संग भर्न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कथाहरु को बारे मा जान्न को लागी पढ्नुहोस् कि फिल्म शैली को विकास भएको छ!
तस्करी एक अपराध हो: अवैध सामान समय र क्षेत्रहरु भर मा फरक छ। तंबाकू, रक्सी र सिंथेटिक औषधिहरु विभिन्न अवधिको अवधिमा दण्डित व्यापार को सूची मा शामिल गरीएको छ। त्यहाँ मानव बेचबिखन को लागी समर्पित संगठनहरु छन्!
अपरेशन को जटिलता को कारण, अपराधीहरु अटूट दिशानिर्देशहरु द्वारा शासित समूहहरु भित्र संगठित। यही कारणले गर्दा पौराणिक माफियाहरु समय संगै बनेका छन्। उदाहरण को रूप मा हामी पाउँछौं इटालियन, रूसी र जापानी माफिया सबैभन्दा मान्यता प्राप्त बीच। अर्कोतर्फ, अमेरिकी महाद्वीप पनि व्यापक नेटवर्क छ संगठित अपराध, जसले धेरै माफिया फिल्महरु लाई प्रेरित गरेको छ।
शीर्षकहरु को बीच मा कि फिल्म थिएटर मा सबै भन्दा ठूलो दर्शक उत्पन्न गरीएको छ, हामी निम्न पाउँछौं:
1 द गॉडफादर (भाग I, II, III)
2 पल्प फिक्सन
5 एलियट नेस को अस्पृश्य
6 अमेरिकी ग्याङ्गस्टर
7 अन्य सिफारिश माफिया चलचित्रहरु
द गॉडफादर (भाग I, II, III)
यो एक सिनेमाई क्लासिक छ कि दुई sequels छ। यो मारियो Puzo द्वारा उपन्यास को एक अनुकूलन हो र यो प्रसिद्ध फ्रान्सिस फोर्ड Coppola द्वारा निर्देशित गरिएको थियो। त्रयीको पहिलो फिल्मले वर्षको उत्कृष्ट फिल्मको ओस्कार जित्यो। यो १ 1972 XNUMX२ मा रिलीज भएको थियो र मार्लोन ब्रान्डो, अल पचिनो, रोबर्ट डुवाल, रिचर्ड कास्टेलानो र डियान केटनले अभिनय गरेका थिए।
"द गॉडफादर" Corleone कुल को कथा बताउँछ: एक इटालियन-अमेरिकी परिवार बाट बनेको छ कि न्यूयोर्क को कोसा नोस्ट्रा को पाँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवारहरु मध्ये एक हो। यो परिवार माफिया मामिलाहरु संग सम्बन्धित छ जो डन Vito Corleone, को नेतृत्वमा छ।
इतिहास १ 1974 1990४ र १ XNUMX ० मा रिलीज भएका दोस्रो र तेस्रो भागहरुमा पूर्वव्यापी रुपमा पुन: गणना गरियो क्रमशः। परिवारमा ३ छोरा र एक महिला छन्। ती मध्ये केहि को लागी यो पारिवारिक व्यापार संग जारी राख्न को लागी महत्वपूर्ण छ, तथापि अन्य रुचि छैन। सामान्यतया हामी डन Vito परिवार संग मिलेर आफ्नो साम्राज्य कायम राख्न को लागी काम गर्न पाउँछौं।
तीन फिल्महरु को दौरान हामी गठबन्धन र पाउँछौं पाँच मुख्य परिवारहरु कि इटालियन अमेरिकी माफिया को हिस्सा हो र त्यो क्षेत्र नियन्त्रण को बीच झगडा। Corleones को अतिरिक्त, हामी परिवार पाउँछौं Tattaglia, Barzini, Cuneo र Stracci।
एक शक बिना, यो एक त्रयी हो कि तपाइँ याद गर्न सक्नुहुन्न! उनका तीन फिल्महरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा प्रशंसित र प्रशंसित उत्पादनहरु मध्ये एक हुन्। २०० 2008 मा, यो सबै समय को ५०० सर्वश्रेष्ठ चलचित्रहरु को रैंकिंग मा पहिलो स्थान।, साम्राज्य पत्रिका द्वारा बनाईएको।
यो Quentin Tarantino को सबैभन्दा प्रतिनिधि उत्पादनहरु मध्ये एक हो, यो १ 1994 ४ मा रिलीज भएको थियो र यो दशक को सर्वश्रेष्ठ फिल्महरु मध्ये एक मानिन्छ। फिल्म धेरै अन्तरसम्बन्धित अध्यायहरुमा विभाजित छ। यो उमा Thurman, जॉन Travolta, शमूएल एल जैक्सन र ब्रुस विलिस को रूप मा प्रसिद्ध अभिनेता ताराहरु।
कथानक दुई हिट मानिसहरु: भिन्सेन्ट र जुल्स को कहानी बताउँछ। उनीहरु नामको एक खतरनाक गैंगस्टर को लागी काम गर्छन् मार्सेलस वालेस, जो मिया नाम को एक आश्चर्यजनक पत्नी छ। मार्सेलसले आफ्नो हिटमैनलाई उसबाट चोरी भएको रहस्यमय ब्रीफकेस बरामद गर्ने कामको साथसाथै आफ्नी श्रीमतीको हेरचाह गर्ने काम गर्दछ जब ऊ शहर बाहिर छ।
मिया एक सुन्दर जवान महिला जो उनको दैनिक जीवन संग बोर छ, तेसैले भिन्सेन्ट संग रोमान्टिक संलग्न हुन्छ: उनको पतिको कामदार मध्ये एक! दुबै बिचको सम्बन्ध एक ठूलो खतरा को प्रतिनिधित्व गर्दछ यदि पति लाई स्थिति को बारे मा थाहा छ। जुल्स को चेतावनी को बावजूद, भिन्सेन्ट मिया को लागी उसको भावनाहरु लाई बढ्न दिन्छ र उसको सबै इच्छाहरु लाई लिन्छन्, जस मध्ये एक उनको जीवन लाई जोखिम मा राख्छ!
शहर को चारै तिर आफ्नो पैदल यात्रा मा, उनीहरु एक क्लब मा भाग लिन्छन् जहाँ फिल्म को सबैभन्दा प्रतीकात्मक दृश्यहरु मध्ये एक भुइँ मा एक विदेशी नृत्य को माध्यम बाट हुन्छ।
Tarantino को quirky शैली संग, कहानी प्रकट हुन्छ हिंसा, हत्या, लागूपदार्थ र कालो हास्यले भरिएको। यदि तपाइँ यसलाई देख्नुभएको छैन, तपाइँ यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न!
यो शीर्षक १ 1932 ३२ मा जारी एक फिल्म को एक रीमेक संग मेल खान्छ। नयाँ संस्करण १ 1983 ३ मा रिलीज गरीएको थियो र अल पचिनो अभिनित। "स्कार्फेस" गवा माफिया फिल्महरु को एक संग मेल खान्छ कि सबैभन्दा विवाद उत्पन्न भयो: यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा हिंसा को आफ्नो उच्च सामग्री को लागी "X" दर्जा दिइएको थियो!
टोनी मोन्टाना, नायक, संयुक्त राज्य अमेरिका मा बसोबास गर्ने एक कुरूप अतीत संग एक क्यूबा आप्रवासी हो। गरिबी र सीमाहरु बाट भरीएको जिन्दगी बाट थकित, टोनीले आफ्नो जीवनको गुणस्तर सबै मूल्यमा सुधार गर्ने निर्णय गर्दछ। यही कारण हो कि उनी र उनको साथी मैनी स्थानीय भीड मालिकहरु को लागी अवैध रोजगार लिन शुरू गर्छन्। चाँडै उनको महत्वाकांक्षा बढ्छ र उसको आफ्नै व्यापार लागूपदार्थ कारोबार शुरू र एक ठोस वितरण र भ्रष्टाचार नेटवर्क बनाउँछ। उहाँ यस क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागुऔषध तस्करहरु मध्ये एक बन्नुभयो!
जब उनी सफल हुन्छन्, उनी आफ्नो दुश्मन मध्ये एक को प्रेमिका लाई जित्न को लागी निर्णय गर्छन्। जीना, मिशेल Pfeiffer द्वारा निभाईएको, एक प्रतिष्ठित महिला जो केहि समय पछि टोनी संग विवाह गरीन्छ।
टोनी कोकीन को लत बन्छ र यो आफ्नो गुस्सा नियन्त्रण गर्न को लागी बढ्दो गाह्रो छ। उसले दुश्मनहरुको आफ्नो सूची बढाउन र वैवाहिक समस्याहरु लाई शुरू गर्दछ। कथा को पाठ्यक्रम मा, संगठन को दुश्मनहरु संग संघर्ष को धेरै दृश्यहरु प्रकट।
तपाइँ यो फिल्म याद गर्न सक्नुहुन्न, यो अमेरिकी फिल्म संस्थान को चयन को शीर्ष १० भित्र छ!
प्रसिद्ध को निर्देशक मार्टिन Scorsese; हामी २०० recent मा रिलीज भएको सबैभन्दा भर्खरको माफिया फिल्महरु मध्ये एक पाउँछौं। पुलिस सस्पेन्स ड्रामा मा, हामी लियोनार्डो डि क्याप्रियो र म्याट डेमन को नायक को रूप मा पाउँछौं। द डिपार्ट्डले त्यो बर्षको सबैभन्दा राम्रो तस्वीर को लागी ओस्कार जित्यो!
कथानक को जीवन मा केन्द्रित छ दुई व्यक्ति जो विरोधी पक्षहरुमा घुसपैठ गर्छन्: एक पुलिस माफिया मा घुसपैठ र एक भीड पुलिस मा घुसपैठ। नाटक, रहस्य र षडयन्त्रले भरिएको विस्फोटक संयोजन! सनकी अभिनेता ज्याक निकोलसनले दृश्यहरु को एक ठूलो संख्या प्रदान गर्दछ कि एक अजीब प्रदर्शन संग तपाइँको भावनाहरु लाई हलचल पार्नेछ किनकि उनी फ्रान्क कोस्टेलो खेल्छन्। उहाँ एक खूनी भीड हो जसको धेरै दुश्मनहरु छन् र जसको दुई नायकहरु मध्ये एक संग धेरै नजिकको सम्बन्ध छ, जो बोस्टन पुलिस विभाग बाट उसको लागी जासूसी गर्दैछ।
त्यहाँ एक प्रेम त्रिकोण छ पुलिस विभाग बाट एक मनोवैज्ञानिक नेतृत्व।
हामी कथा मा अप्रत्याशित मोड़ र धेरै कारबाही पाउँछौं, यही कारणले यो एक शैली को सर्वश्रेष्ठ फिल्महरु मध्ये एक मानिन्छ। यो उल्लेख गर्न को लागी कि Scorsese सधैं एक एकल निष्पादन संग एक फिल्म को ग्यारेन्टी हो!
एलियट नेस को अस्पृश्य
१ 1987 in मा रिलीज भएको यो माफियासँग जोडिएको फिल्मले उल्टो कथा बताउँछ: त्यो हो, संगठित अपराध को बिरुद्ध लडाई मा के हुन्छ को पुलिस संस्करण। यसमा केविन कोस्टनरले अभिनय गरेका थिए र मुख्य कलाकार रोबर्ट डी नीरो, साथै सीन कोनेरी सामेल छन्।
कथानक एसयो शिकागो मा अमेरिकी भीड को सुनसान मा ठाउँ लिन्छ। नायक एक हो पुलिस जसको काम निषेध लागू गर्नु हो, त्यसैले उसले डरलाग्दो अल Capone मा एक पट्टी छापा। त्यो ठाउँमा उसले एउटा अनौठो विसंगति भेट्टाउँछ जसले उसलाई सोच्दछ कि शहर पुलिस तस्करहरु द्वारा घूस दिइन्छ। त्यसैले कि dतपाइँलाई भ्रष्टाचारको पर्खाल भत्काउन मद्दत गर्न एक टीम भेला गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।
क्लासिक XNUMXs सिनेमा को ठूलो खुराक धेरै कार्य संगै तपाइँ पर्खनुभएको छ!
डेन्जेल वाशिंगटन अभिनीत, यो ऐतिहासिक फिल्म हाम्रो सर्वश्रेष्ठ माफिया फिल्महरु को सूची मा छ किनकि यो साँचो घटनाहरु मा आधारित छ र हामी कानून को बाहिर बस्दै सफलता को दुबै पक्ष देख्छौं।
को फ्रैंक लुकास कथा, एक प्रख्यात लागुऔषध तस्कर को henchmen जो प्राकृतिक कारणहरु बाट मर्छन्। लुकास चालाक र बुद्धिमान थियो, त्यसैले उसले कसरी व्यापार चलाउने र सिके उनले आफ्नो कम्पनी बनाउन शुरू गरे जसमा उनले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई सामेल गरे कि उहाँ विनम्र मूल को थियो। लुकास ईवा, एक सुन्दर महिला, जसको साथ उनी बिहे गर्ने र एउटा परिवार शुरू गर्ने निर्णय गरीन्।
चाँडै उनीहरु उनीहरु एक सनकी तरीका मा बाँच्न शुरू गर्दछन् जो अविनाशी जासूस रिची रोबर्ट्स को ध्यान आकर्षित गर्दछ, रसेल क्रो द्वारा खेलीयो। तुरुन्तै जासूस माफिया को नयाँ ठूलो मान्छे को पर्खाल पछाडि लिन को लागी उजागर गर्ने उद्देश्य संग एक विस्तृत अनुसन्धान शुरू गर्दछ।
फिल्म को विकास मा हामी पाउन सक्छौं हिंसा र भ्रष्टाचार को महान कार्यहरु माफियाहरु संचालन जारी राख्न को लागी प्रयोग गर्दछ।
हामी यस फिल्म मा बदमाश को मानवीय पक्ष देख्न सक्छौं, अझै समस्याहरु उनीहरुलाई सताउन बन्द गर्दैनन्। अमेरिकन ग्याster्गस्टर होलीवुड भीड फिल्महरु मन पराउनेहरु को लागी एक प्रमुख बन्नुभएको छ!
अन्य सिफारिश माफिया चलचित्रहरु
माथि उल्लेखित शीर्षकहरु को अतिरिक्त, हामी अरु धेरै सान्दर्भिक छन् र तल उल्लेख गरीएको छ कि पाउँछौं:
एक पटक अमेरिका मा एक समय
फूलहरु बिच मृत्यु
भगवान को शहर
बिन्दु खाली प्रेम
छीन: सुँगुर र हीरा
सूची अनन्त छ! त्यहाँ यस विधा को लागी अनगिन्ती शीर्षक हो कि ज्यादातर हामीलाई कार्य, रहस्य, विलासिता र हिंसा को महान दृश्यहरु प्रदान गर्दछ। मुख्य नियम बाँच्न को लागी मार्नु हो!
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » सर्वश्रेष्ठ माफिया चलचित्रहरु